Maxaabiis Taliban oo lasii daayey iyo ciidanka Mareykanka oo la yareynayo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxaabiis Taliban oo lasii daayey iyo ciidanka Mareykanka oo la yareynayo
Madaxweynaha Afgaanistaan Ashraf Ghani ayaa shalay ku dhawaaqay sii deynta maxaabiis gaareysa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban ah, taasi oo wadada u xaareysa bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanka garwadeenka ka yahay ee lala galo kooxdan Islaamiga ah.
Go’aanka Ghani ayaa yimid ka dib markii gole ay dowladdu maalgaliso oo loo yaqaan Loya Jirga, ay kula taliyeen in uu sii daayo maxaabiista, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhexmaray Taliban iyo Maraykanka, kaasi oo lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsatay ee Afghanistan.
Golaha Sare ee Afghanistan ee Loya Jirga, ayaa Axadda maanta ah ogolaaday sii deynta 400 oo ah maxaabiis ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilaaban karaan wada xaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan.
“Si meesha looga saaro carqalad, loo bilaabo howlaha nabadeynta iyo loona dhameeyo dhiigga daadanaya, Loya Jirga waxa ay ogolaatay siideynta 400 oo maxaabiis Taliban ah,” ayaa lagu yiri qaraar ka soo baxay golaha.
Loya Jirga ayaa Jimcigii loogu yeeray kalfadhigan oo ay ku yeesheen caasimadda Kabul, si ay uga hadlaan siideynta maxaabiista Taliban, ka hor wadahadallada nabadeed.
Dowladda Afghanistan ayaa ilaa iyo haatan sii deysay ku dhowaad 5,000 oo maxaabiis Taliban ah.
Dhinaca kale, Xoghayaha Gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan laga dhigayo “tiro ka yar 5,000” marka la gaaro dhamaadka bisha November.
Hadalkan la xiriira yaraynta ciidamada ayuu xoghayaha difaaca Mareykanku ka sheegay wareysi Sabtidii uu baahiyey TV-ga Fox News.
Toddobaadkii hore, Madaxweyne Donald Trump ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta Axios ku sheegay in uu jeclaan lahaa in ku dhawaad 8,600 oo ah askarta Mareykanka ah ee ku sugan Afghanistan la dhimo tiradooda oo laga dhigo inta u dhaxaysa “4,000 ilaa 5,000.”
Warkan la xiriira yareynta tirada askarta Mareykanka ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaalo lagu bilaabayo wadahadallada u dhexeeya Taliban iyo dowladda Afghanistan si loo soo afjaro dagaallada mudada dheer ka socday dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Asia.
Maxaabiis Taliban oo lasii daayey iyo ciidanka Mareykanka oo la yareynayo was last modified: August 11th, 2020 by Admin
Ruux hubaysan ayaa xalay toogasho ka geystay afaafka hore ee aqalka cadd xilli uu Trump shir jaraa’id qabanayay
Amar la duldhigay Ciidamada ka howlgalla deegaannada Koofur Galbeed
Madaxweyne Qoor-qoor oo daahfuray mashruuc cusub oo laga fulinayo Galmudug (Sawirro)
Fatahaadda Wabiga Shabeelle oo go’doomisay magaalada Jowhar
Guddoomayaha Aqalka Sare oo eedeyn kulul u jeediyay Madaxweyne Farmaajo